Transgbanwe Nnukwu data ka ọ bụrụ Ihe Nwe Echiche | Martech Zone
2013 nwere ike ịbụ afọ nke Big Data… Ị ga-ahụ ọtụtụ mkparịta ụka ndị ọzọ ebe a Martech Zone na ngwaọrụ ịchọta, jikwaa na leverage dị oke oke data.
Taa, Neolane na Direct Marketing Association (DMA) wepụtara akụkọ efu aha ya bụ, Nnukwu data: Mmetụta na Nhazi Mgbasa Ozi. A na-ekekọrịta ihe nchoputa dị mkpa na akụkọ a site na infographic a.
Nkwupụta ahụ na-achọpụta na ọtụtụ ngalaba ngalaba azụmaahịa anaghị ejikebe iji jikwaa ọnụọgụ data na-arịwanye elu ma na-azụ n'atụmatụ maka nnukwu uto. N'ime nchọpụta:
60% enweghị ugbu a ma ọ bụ ejighi n'aka ma ọ bụrụ na ụlọ ọrụ ha nwere atụmatụ akọwapụtara maka ijikwa nsogbu nke Big Data
81% na-eche na ha dịtụ njikere ma ọ bụ na ha adịchaghị njikere ma a bịa n'iwu na ụkpụrụ ọhụrụ nke nchịkwa data ịchị ahịa
50% na-ekwu na usoro nka na-agbanwe, ọkachasị uto nke ọwa mmekọrịta na mkpanaka
Tags: nnukwu datadatadmaakụkọ freeneolaneakụkọzettabytes